I-Induction yokomisa ingqolowa ngendlela yokuFudumeza indlela yokonga umbane
Ukonga umbane e ukumiliselwa kokutya okuziinkozo Ngendlela yokufudumeza ngaphakathi
Qho ngonyaka i-Kazakhstan ivelisa malunga ne-17-19 yezigidi zeetoni zokutya okuziinkozo ngobunzima obucocekileyo, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe malunga nezigidi ezi-5 zeetoni zokutya okuziinkozo, kunye nomthamo ophakathi wosetyenziso lwasekhaya ufikelela kwizigidi ezili-9 ukuya kwezi-11 zeetoni. Uphuhliso oluthe kratya lweshishini lokutya okuziinkozo kunye nokukhuthaza ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kokutya okuziinkozo kufuna ukuphuhliswa kwesiseko sokugcina, ukuhambisa nokomisa iinkozo, kubandakanya nokwakhiwa ngokutsha nokwakhiwa ngokutsha kweesilos ezindala zokutya okuziinkozo, ukwakhiwa kweetheminali zamazibuko kunye nokuthengwa kweenqanawa zomthwalo ezomileyo kunye neziphethe iinkozo (Baum, 1983). Kukho isidingo sokwenza eli shishini libe lelala maxesha kwaye umsebenzi ufuna iinzame ezomeleleyo zikarhulumente kunye nabavelisi bezolimo besizwe.
Abathathi-nxaxheba kwiQonga leenkozo le-Astana Kazakh Grain V KAZGRAIN-2012 baxoxe ngemeko yangoku yentengiso yeenkozo, imikhwa kunye nokulindelwa kwexabiso, kunye nemiceli mngeni kulungiselelo lwezinto kunye nakwiziseko zophuhliso. Kwaqatshelwa ukuba kwiminyaka eli-10 eyadlulayo iKazakhstan ibingenakuthathelwa ingqalelo njengothumela ukutya okuziinkozo kumazwe angaphandle, ngelixa okwangoku imiba yokuthumela kwelinye ilizwe ibonwa njengeyona iphambili. Kwaye imveliso kunye nokoma kwengqolowa kuthatha enye yeendawo eziphambili kwezolimo nakwezolimo, kunye noqoqosho luphela.
Uhlalutyo lwamava kumashishini amaninzi okuvelisa kulungiso lwengqolowa lwasemva kokuvuna kungqina ukuba owona msebenzi uphambili ekuqinisekiseni ukhuseleko kunye nomgangatho wembewu esandula kuvunwa kukomisa kwabo. Ukubaluleka kokumiswa kokutya okuziinkozo kuyanda kwindawo efumileyo: ukulibaziseka ukomisa okanye ukwenza lo msebenzi ngokuchasene nolawulo lobuchwephesha kubangela ilahleko yesityalo. Ngokophando kwi25-28% yokufuma kwemfumba kangangeentsuku ezintathu ukuntshula kuncipha ngama-20%. Kwaye ilahleko yento eyomileyo yenza i-0.7-1% ngosuku xa ukufuma kwengqolowa kungama-37% (iGinzburg, 1973).
Izinto ezibalulekileyo ekusetyenzisweni ngokufanelekileyo kwezomisi kwezolimo kukubonelela ngomgangatho ophezulu wokutya okuziinkozo, ukonyuka kwebhendi yeeyunithi, kunye nokunciphisa iindleko zamandla. Isiseko sokuphucula ukusebenza komileyo okhoyo kwezolimo kukuqinisekisa ukususwa okwaneleyo nokuzinzileyo kobumanzi ukusuka kwityhubhu yemitha enye kwiikhamera zokomisa ingqolowa. Esinye sezizathu zokuthintela oku kukuba iiyunithi zokupholisa, ezakhelwe kwi-shaft shaft, azenzi iimeko ezifanelekileyo zokupholisa okuziinkozo ngokupheleleyo kwaye ke zinciphise umthamo osebenzayo weshafti yokomisa kunye nokususa ukufuma kwimitha yeekhubhu zekhamera.
Oko imveliso yengqolowa ka-2010 ibonakalisa ukukhula okuzinzileyo: indawo yezityalo inyuke nge-17%, isivuno sonyuke nge-25%, kwaye isivuno sisonke-ngama-52%. Ngomhla woku-1 kuJanuwari ngo-2012 iKazakhstan yayinee-258 zeesilos ezinomthamo wokugcina i-14 771.3 yeetoni ezingamawaka kunye neelifti ezinomthamo wokugcina i-14 127.8 lamawaka eetoni. Ukonyuka kwesivuno kunye nokuvunwa okupheleleyo kufuna ukuphucula itekhnoloji yokumisa ukunqanda ilahleko yezityalo kunye nokugcina umgangatho weenkozo.
Eyona ndlela yokujonga ukomisa okusanhlamvu nokususa ukufuma yile indlela yokufudumeza ngaphakathi Ehlala ifundwa kancinci kwaye kunqabile ukuba isetyenziswe xa kusenziwa ngenxa yokungafezeki okubonakalayo kubuchwephesha bokuguqula abaguquleli. Nangona izixhobo zokufudumeza Imveliso ngoku iyaphuhliswa kwaye ukusetyenziswa kwayo kokumisa ukutya okuziinkozo kukhethwa ngokuthelekiswa neendlela zokufudumeza zemveli (Zhidko, 1982).
Okwangoku ukufudumeza i-induction kusetyenziselwa ukuqina komhlaba kweemveliso zentsimbi, ngokufudumeza i-deformation yeplastiki (ukubumba, ukunyathela, ukucofa, njl. , isinyithi. Ukufudumeza ngokuthe ngqo kusetyenziselwa ukufudumeza izixhobo zetekhnoloji (imibhobho, iitanki, njl.), Ukufudumeza ulwelo, ukomiswa kweebhatyi kunye nezinto (umz., Iinkuni). Eyona parameter ibalulekileyo yokufakelwa kobushushu kufakelo rhoqo. Kwinkqubo nganye (ukuqina komphezulu, ngokufudumeza) kukho uluhlu lwamaxesha afanelekileyo, ukubonelela ngokusebenza kweyona teknoloji kunye nezoqoqosho. Ukuphindaphinda ukusuka kwi-50Hz ukuya kwi-5 MHz kusetyenziselwa ukufudumeza ubushushu.
Izibonelelo zokufudumeza ubushushu zibandakanya oku kulandelayo:
Ukuhanjiswa kwamandla ombane ngokuthe ngqo kumzimba wokufudumeza kuvumela ukufezekisa ukufudumeza ngokuthe ngqo kwezinto, ngaloo ndlela izinga lokufudumeza li
Ukuhanjiswa kwamandla ombane ngqo kumzimba ofudumeleyo akufuneki zixhobo zonxibelelwano. Oku kuluncedo kumgca ozenzekelayo
Xa izinto zokufudumeza zidayelektri, umz. Iinkozo, ke amandla asasazwa ngokulinganayo kumthamo wezinto zokufudumeza. Ngenxa yoko, le ndlela yokungenisa inikezela ukufudumeza ngokukhawuleza kwe
Induction Ukufudumeza kwiimeko ezininzi kunokunyusa imveliso kunye nokuphucula iimeko zokusebenza. Isixhobo sokungenisa sinokuthathwa njengohlobo lwesiguquli, xa isitshixo sokuqala (i-inductor) sinxulunyaniswa nomthombo wamandla we-AC, kwaye isixhobo sokufudumeza sisebenza njengesibini
Ukuncitshiswa kweendleko zofakelo lonke kufuna ukuphuculwa kunye nokuphunyezwa kwezinto ezilula zokuyilwa kwezifudumezi.
Umahluko ophambili phakathi kokufudumeza kwe-induction kwiindlela zesiko zokomisa ubushushu bokufudumeza. Ubushushu bungena kwimveliso (ebonakalayo) hayi evela kumphezulu womhlaba; yenziwa ngevolumu yonke ngaxeshanye, le nkqubo ivumela ukomisa ukutya okuziinkozo ngokufanelekileyo kusetyenziswa amandla aphantsi. Kwanokusasazwa kokufuma kwenzeka kwinto eyomileyo ngexesha lenkqubo yokufakwa kobushushu. Ukungeniswa akuthathi ukutshintshwa kobushushu ukusuka kwisifudumezi ukuya kwinto. Ngelixa ukusebenzisa ezinye iindlela zokomisa kufuna ukufudumeza umoya, emva koko udlulisele ubushushu ukusuka kumoya oshushu uye kwizinto. Kwinqanaba ngalinye-ukufudumeza umoya, ukuthuthwa kwawo, kunye nokudluliselwa kobushushu kwiimveliso-ilahleko zobushushu azinakuphepheka.
Kule mihla amashishini e-Kazakhstan asebenzise ii-heater zokungenisa njengoko zibiza kakhulu. Iimodeli zezibane ezindala ze oomatshini bokufudumeza ziphelelwe lixesha kwaye azenziwanga.
Ukomisa okusanhlamvu ngokushushu ngokungenisa. Ukomisa kumaleko owayo
Sicebisa indlela yokufudumeza kwindawo eyomileyo yokutya okuziinkozo (Umzobo 1) apho izinto zokutya okuziinkozo zidlula khona, ziqhutywa ngamandla womxhuzulane, ngokusebenzisa ishafti yokomisa. Ngaphezulu kweenkozo ezomisiweyo zilayishwa zii-emele zokuhambisa okanye ezinye izixhobo zothutho; Emva koko ingqolowa ingena kwinqaba yokumisa. Kwikhamera yokomisa inqaba i-inductor, edityaniswe kwisiguquli samaza, yenza intsimi ye-electromagnetic (flux) yamaxesha aphezulu.
Ukomisa kumaleko owayo. Umaleko owayo umela ukuhla okusasaza okusasazekayo okukhutshiweyo, ngokuyinxenye kulungelelaniswa nokuhamba okuphezulu kwerhasi (i-aerodynamic braking). Uxinzelelo lwenene lweenkozo luyanda ekuhambeni kwentshukumo. Ukomisa kumaleko omisiweyo. Imeko yokunqunyanyiswa kokutya okuziinkozo ifezekisiwe kumjelo werhasi xa unyusa isantya sonikezelo lwamandla. Kwinkqubo yonke umphezulu wengqolowa ubandakanyeka kutshintsho lobushushu kunye nokufuma kunye nerhasi. Ixesha lokutya okuziinkozo kumbhobho we-pneumo awugqithi kwimizuzwana embalwa; ubushushu bokomisa iarhente benza i-350-400 ° C. Nangona kunjalo, ukuncitshiswa kokufuma kufikelela kwipesenti yeqhezu. Ke ngoko, izixhobo ezinobunzima bokutya okuziinkozo azisetyenziswanga njengesomisi esahlukileyo, kodwa njengesixhobo samagumbi adibeneyo adibeneyo.
Namhlanje iifemu zezolimo kunye neelifti zixhotyiswe ikakhulu zizomisi ngqo zeshaft shaft. Ezi zomisi zibonisa ukungalingani okukhulu ekufudumaleni nasekumiseni ingqolowa, ethi yona ibangele iindleko zokumisa i-thermal. Esona sizathu siphambili kukungafezeki ekunikezeleni ngearhente yokomisa kunye nomoya womoya ojikelezayo ukuze ungcolise ingqolowa.
Imeko ebalulekileyo yomsebenzi owomileyo wokutya okuziinkozo kukupholisa okukuko kweenkozo ezomisiweyo. Ngokwesicwangciso izixhobo zokupholisa ezomisa ukutya okuziinkozo ziyilelwe ukwenzela ukuba iqondo lobushushu lokutya okuziinkozo kwimveliso lingagqithi kubushushu bomoya obungaphezulu kwe-10 ° C. Nangona kunjalo, ngokwenza oku eli xabiso lifikelela ngaphezulu kwe-12 ° C xa ubushushu bomoya bungaphezulu kwe-15 ° C. Kananjalo izomisi zokhozo lwangoku zibonelela ngokungalingani okukhulu ekupholiseni umaleko ngamnye weenkozo. Kwimeko ekuxoxwe ngayo ukufakwa kobushushu bokomeleza kunokuba yeyona ndlela ifanelekileyo ngokomgangatho wemveliso, umgangatho kunye nokusebenza kwendleko.
IBaum, A., 1983. Ukutya okusanhlamvu [ngesiRashiya], eMoscow: eKolos
IGinzburg, A., 1973. Izinto ezibalulekileyo zethiyori kunye netekhnoloji ekomiseni ukutya [ngesiRashiya], eMoscow: Icandelo lokutya
UZhidko, V., 1982. Ukomisa ukutya okuziinkozo kunye nokomisa ukutya okuziinkozo [ngesiRashiya], eMoscow: eKolos
iindidi Teknoloji tags Thenga i-Heater Grain Heater, Ukuqwayita ingqolowa, Ukuqwayita ukungeniswa kweenkozo, Ukuqwayita ukutya okuziinkozo, Induction Ukuqwayita, Induction Ukuqwayita okuziinkozo, Induction Ukuqwayita Ubushushu Heater, Ukuchithwa kwexabiso lokushisa kweGrain Heater, Induction Ukucoca umatshini weenkozo, Induction Ukuqwayita Inkqubo yeenkozo, Ukutshisa ukutshisa ukomisa ingqolowa Post yokukhangela